‘मिलाउन’ सक्रिय चार नेताको नजरमा को हुन् एमाले एकताका बाधक ? - News20 Media
June 10, 2021 N20LeaveaComment on ‘मिलाउन’ सक्रिय चार नेताको नजरमा को हुन् एमाले एकताका बाधक ?
नेकपा एमालेको पहिलो पुस्ताका नेताको ‘प्रस्ताव–दोहोरी’ले एकताका लागि अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन। तर, ‘दोस्रो पुस्ता’ले एकता कायम राख्ने विषयमा हिम्मत हारेको छैन।
एकताको अपेक्षासहित सक्रिय तर मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित एक नेता योगेश भट्टराईले बुधबार बिहान फेसबुकमा अर्थपूर्ण ‘स्टाटस’ लेखे। ‘एमालेको एकताको मुल जडरु’ भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
केही दिनपछि इमेज टेलिभिजनको हटसिटमा सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामी अलग–अलग भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने धेरै छन्। यदि यो पार्टी रहेन भने यसको प्रभाव के हुन्छ नेपालको भावी राजनीतिमारु यो देशमा दुईटा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति स्थापित भए, एउटा नेकपा एमाले, अर्को नेपाली कांग्रेस। यी दुवै प्रजातान्त्रिक शक्ति हुन्। देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्ति हुन्। यी दुई शक्ति कमजोर भए भने देशमा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि चुनौती खडा हुन्छ।’
त्यसपछि उनले ‘नेपाल दृश्य’ नामक युट्युब च्यानलमा कुनै एउटा पार्टी फुट्दा देशलाई कसरी असर पर्छ भनेर शोभियत संघको उदाहरण दिँदै सविस्तार बताएका छन्। उनको बुझाइ छ, ‘पार्टी भनेको निश्चित आधारशिला पनि हो। पार्टी विभाजन हुँदा जनताको सोचमा विभाजन आउँछ।’
अहिले एमालेको विभाजनले नेपालको संविधान पनि ‘कोल्याप्स’ हुने र राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्ने सम्भावना उनले देखिरहेका छन्।
अर्का नेता गोकर्ण विष्ट एमालेको विभाजनले लामो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि नै खतरामा पर्नेतर्फ सचेत गराइरहेका छन्। उनी विभाजित पार्टीबाट लोकतन्त्र जोगाउने कुरा सम्भव नहुने बताउँछन्। मंगलबार नेपाल लाइभसँगको लामो संवादका क्रममा विष्टले भने, ‘सही विचार बोकेको सबल र एकीकृत पार्टीले मात्रै जनता, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलन लगायतका कुरालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छ। एउटा विभाजित पार्टीले न राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्छ, न लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ।’
नेता योगेश भट्टराई पार्टी विभाजनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरतामै समस्या उत्पन्न हुने सक्नेमा संशकित छन्। त्यसैले एमालेको एउटा पक्ष ‘वैकल्पिक बाटो’तर्फ अघि बढ्दा गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको एकताको प्रस्तावमा उनी सकारात्मक भए।
‘हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइला’बाट सुरु हुने विम्बसहित उनले गत आइतबार संवादको सुरुवात गर्न सुझाए। संवादमार्फत् अनेकताको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनको तर्क यस्तो थियो, ‘मुलतः संबिधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ।’
एमाले एउटा भू–राजनीतिक लपेटमा परेको उनीहरुले बुझेका छन्। यो शक्तिलाई कमजोर पारेर राष्ट्रिय एकता भड्काउन खोज्नेहरु सक्रिय भएको उनीहरुको बुझाइ छ। त्यसैले उनीहरुको चाहना पूरा हुन नदिन पनि एकताको कोशिस जारी राख्न उनीहरु आफूलाई सम्हाल्न खोजिरहेको सन्देश दिइरहेका छन्।
सपेरा टोक्ने सर्प, अतिवादी र आत्मसम्मान
एमालेलाई विभाजन गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्ति सक्रिय रहेको उनीहरुको बुझाइ छ। बाह्य शक्तिको प्रभाव निस्तेज पार्न आन्तरिक रुपमा मजबुत हुनुपर्ने उनीहरुले बुझेका छन्।
शीर्ष नेताहरुलाई एक ठाउँ आएर संवाद गर्न नदिन एमालेकै केही नेताहरु सक्रिय रहेको मिलाउन सक्रिय नेताहरुको बुझाइ छ। उनीहरुले ‘सपेरा टोक्ने सर्प’, ‘अतिवादी’, ‘मण्डले’ आदिका नामबाट तिनलाई सम्बोधन पनि गरिरहेका छन्।
हरेक घटनाको दीर्घकालीन प्रभावसमेत केलाउने गरेका भूसालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सुरुदेखि खबरदारी गरे। तर, विभाजनकै डिलमा पुगेपछि भने उनी खबरदारी छाडेर ‘समझदारी’तर्फ लागे। नेताहरुलाई वैचारिक भिन्नता र व्यावहारिक उल्झनभन्दा माथि उठेर एकताका लागि तयार हुन दबाब दिन थाले।
एकता नचाहने समूहले भूसालले नेपाल पक्ष छाडेर ओलीपक्षमा पुगेको प्रचार ग¥यो। आफूले एकताको कुरा गर्दा त्यसलाई आत्मसमर्पणको रुपमा व्याख्या गर्ने र विवादको कुरा गर्दा विभाजनको रुपमा व्याख्या गर्ने एउटा समूह नै तयार भएको भूसालको बुझाई छ। त्यही प्रचारको खण्डन गर्दै उनले ओलीलाई सचेत गराए, ‘धेरैजसो सपेराहरु सर्पबाटै टोकिएका छन्।’
उनले पञ्चायतकालमा राजनीतिलाई विकृत बनाउने सत्ता संरक्षित समूह मण्डलेका रुपमा स्थापित रहेको स्मरण गराए। पञ्चायत धराशायी हुनुमा त्यो समूहको अलोकप्रियताको समेत योगदान रहेको उनी बताउँछन्। उनी सन्देह प्रकट गर्छन्, ‘आज नेकपा एमालेको राजनीतिलाई विकृत बनाउन त्यस्तै समूह त खडा भएको छैनरु अनि परिणाम पनि त्यस्तै हुने त होइनरु’
त्यतिमात्रै होइन, पार्टीको दुवैतिर केही अतिवादीहरु रहेको विष्टलाई पनि महशुस भएको छ। जसले विभाजनपछिको परिणाम नहेरेर असमझदारीलाई ‘इगो’का रुपमा लिएका छन्। उनीहरुले सकेसम्म मिल्न नदिने प्रयत्न गरिरहेको विष्ट बताउँछन्। ‘केपी ओलीतर्फ पनि केही अतिवादीहरु छन्, जसले पार्टीलाई सकेसम्म मिल्न नदिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। माधव नेपाल र झलनाथ समूहमा पनि केही अतिवादीहरु छन् जसले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजित गर्न चाहन्छन्, मिल्न दिन चाहँदैनन्’, उनले भने।
एकताका लागि इमान्दार प्रयास गर्नेहरुलाई कमजोर पार्नका लागि दुवै पक्षबाट गलत प्रचार गर्ने प्रयत्न गरिएको उनले बताए। उनले थपे, ‘गलत प्रचार गर्ने वा प्रचार गराउने प्रयत्न भए। त्यसतर्फ पनि हामीलाई कुनै सरोकार छैन।’
ओलीपक्षको निरन्तरको पेलानबाट आजित नेपालपक्षमा रहेका कतिपयले यतिबेला विभाजनलाई स्वाभिमान र आत्मसम्मानको विषय बनाएको नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। उनले ‘नेपाल दृश्य’को उक्त अन्तवार्तामा भनेका छन्, ‘कतिपय साथीहरु हेलाहोचो भयो। दमन भयो। विभाजन गरौं, आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। क्रान्तिमा लागेकै आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि भन्नुहुन्छ। त्यो भावनाको कदर त गर्नुपर्छ। तर, सुझबुझका साथ एकता जोगाउन सकियो भने उपलब्धि जोगाउन सकिन्छ।’
यसैगरी विभाजनबाट लाभ देख्नेहरु पनि दुवै पक्षमा रहेको बताउँदै उनी थप्छन्, ‘विभाजन हुँदा केही पद पाइन्छ कि भन्ने सोचाइ छ। तर, परिपक्व विचार के हो भने एकतामै बल छ।’
बाह्य शक्तिको प्रभावरु
नेपाली राजनीति ‘स्वतन्त्र’ रुपमा चल्दा पनि आमजनले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। निकटस्थ दुई छिमेकीको राजनीतिक प्रभावका विषयमा विना हिचकिचाहट छलफल भइरहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि दक्षिणतिरको प्रभाव बढी रहेको आम नेपालीको बुझाइ छ।
नेताहरुले पनि बेलामौकामा संकेत गर्छन्। प्रायःजसो अर्को पार्टीमाथि आरोप लगाउन फलाना शक्तिको ‘दलाल’ भनिदिन्छन्।
बुधबार बिहान योगेश भट्टराईले अहिले बनिरहेका असजिला ‘गठबन्धन’को स्रोततर्फ संकेत गरे। ‘एमाले एकताको समस्याको मुल जडरु’ नामक सय शब्दको निबन्ध जस्तै विषय उनले फेसबुकमा लेखे।
त्यो यस्तो छ, ‘कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता कमरेड जेएन खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने। कमरेड जेएन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेर बहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने।’
यति लेखेपछि उनले रहस्यमय प्रश्न गरे, ‘कसले, किन र केका लागि गर्दैछ यो सब रु एमाले एकताको समस्याको मुल जड यहीँ छ।’
यस विषयमा नेताहरुबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र साझा निष्कर्षका साथ एमालेको एकता जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी नेता विष्ट कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्नका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘चाहे देशबाहिर वा देशभित्रका शक्ति केन्द्रहरु हुन्, उनीहरुको चाहनाको गोटी नबनून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। उनीहरुको चाहनाको निमित्त पात्र नबनून् भन्ने पवित्र चाहना हाम्रो हो।’
केही समयअघि नेता भूसालले आफ्नो एकजना ‘कमरेड’ले करिब दुई वर्षदेखि हाम्रो भूराजनीति र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आइलाग्ने खतराबारे भन्दै आएको कुरा मिल्न जान लागेको उल्लेख गरे। जुन विश्लेषण केही भारतीय संस्थापन नजिकका मिडियामा पनि देखिएको उनको दाबी थियो।
उनले त्यो समयमै नेकपाको विवाद समाधान नहुने र अदालतद्वारा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइने बताएको स्मरण गरेका छन्। ‘त्यसपछि संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिनेछ तर निर्वाचन हुनेछैन वा भयो भने पनि जिताइने र हराइनेहरु पहिले नै निश्चित हुनेछन्, त्यसले वैधता गुमाउने छ,’ उनले ती व्यक्तिलाई उद्घृत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘संविधानले काम गर्दैन। त्यसपछि कमरेड ओलीको उपादेयता सकिन्छ। नयाँ खिलराजहरुको अभ्यास हुनेछ। त्यसपछि फेरि ‘नयाँ’ संविधानको कोर्समा मुलुकलार्ई धकेलिने छ।’
यसैगरी पाण्डेले विभिन्न ठाउँमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा विभिन्न शक्तिका कारण नेपालको संविधान पनि कोल्याप्स हुने र राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्ने सम्भावना रहेको औल्याएका छन्।
उनको भनाइ छ, ‘संसद गइसक्यो, संविधान जान्छ भनिराछन्। चुनाव हुने अवस्था छैन। ६ महिनामा चुनाव भएन भने मिति सार्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन। यो सरकार हट्छ। अर्को बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने संविधान नै जाने र हिजोका उपलब्धी गुम्ने खतरा हुन्छ।’
उनले कतिपय ‘सुनेका पात्र’ त्यसमा सक्रिय रहेको कुरालाई ‘आंशिक सत्य’का रुपमा स्वीकारेका छन्। भन्छन्, ‘हामीले सुनेका पात्र सक्रिय पनि होलान्। म बताउन पनि चाहन्नँ। सुनेको कुरा आंशिक सत्य हो। अरु पनि लाग्नुभएको होला। समग्रतमा हेरे मात्रै पूर्ण हुन्छ।’
आफू ‘जानकार’मै पर्ने भएकाले अहिल्यै भन्दा पनि समय आएपछि त्यसबारे बताउने उनले बताउने गरेका छन्।
पुरुषले मात्रै खाना पकाउने संसारकै अनौठो गाउँ, महिला किन जान हुंदैन ?